Mihamafy Ny Fihenjanana Diplaomatika Ao Amin’i Indonezia sy Aostralia Vokatry Ny Fihainoana Resaka An-telefaona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Novambra 2013 21:48 GMT
Ho setriny, hatsahatr'i Indonezia ny fiaraha-miasa ara-tafika sy fitsikilovana manomboka amin'ny taona hoavy ankoatry ny fampodiana ny masoivohony any Aostralia. Endrika fiaraha-miasa diplaomatika iray hafa voakasika amin'izany ny fisamborana ireo mpifindra monina tsy ara-dalàna avy any Aostralia sy ny famotsorana arahana fepetra an'i Schapelle Corby, Aostraliana iray voampanga noho ny fanapariahana zavamahadomelina any Bali.
Tato anatin'ny andro vitsivitsy dia lasibatr'ireo mpanao hetsi-panoherana ny Masoivoho Aostraliana ao Jakarta, dia ireo izay manameloka ny fanaraha-maso nataon'ny governemanta Aostraliana ho toy ny fihetsika manohintohina ny fiandrianam-pirenen'i Indonezia. Nodoran'ireo mpanao hetsi-panoherana ny saina Aostraliana sy ny sarin'i Tony Abbott praiminisitra.
Nanafika tranonkala maro an'ny governemanta Aostraliana ihany koa ny andianà mpijirika antsoina hoe “Anonymous Indonesia” tamin'ny herinandro lasa iny ka tafiditra tao anatin'izany ny Australian Federal Police (AFP), ny Royal Australian Air Force, ary ny Australian Reserve Bank (ARB).
Mandritra izany, Mark Textor mpanao tetikady fampielezankevitra sady mpanolotsain'i Tony Abbot, nibitsika fanehoankevitra iray mirefarefa amin'ny tany mampitaha ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Indoneziana, Martin Natalegawa, amin'ilay kintan'ny filalaovana sarimihetsika vetaveta tamin'ny taona 1970. Nandefa fialantsiny iray noho io bitsika manafintohina nalefany io i Textor ary nanakatona ny kaontiny Twitter avy eo.
Nanaraka ny fanamarihan'i Textor, nandefa fitsampankevitra ny tranonkala Filipiana Interaksyon hanontaniana ny olona hoe iza ilay Filipiana kintan'ny sarimihetsika ho an'olon-dehibe tamin'ny 1970 mitovy amin'Atoa Natalegawa.